phumla, ukuthenga, indalo - I-Airbnb
phumla, ukuthenga, indalo
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLuca
La Casetta yindlu friendly, imizuzu nje ukusuka Outlet of Serravalle. Kulula ukufikelela ukusuka eGenoa, eMilan naseTurin. Indawo efanelekileyo yokuphumla kwakho, ukuthenga okanye ukutyelela ukudibana nendalo.
Indawo yokuhlala ikwimigangatho emibini kwaye inegumbi elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye, igumbi lokuhlala elinesofa kabini, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, iholo kunye negumbi. Onke amagumbi alungisiwe kutshanje.
Ngokwesiqhelo siyakwazi ukuhlalisa abantu aba-5, kunye nokuba nokwenzeka kwebhedi enye.
Indawo yokuhlala ikwimigangatho emibini kwaye inegumbi elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye, igumbi lokuhlala elinesofa kabini, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, iho…
4.87 (iingxelo zokuhlola 89)
Via Guglielmo Marconi, 15, 15060 Stazzano AL, Italy
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stazzano